Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Eder Militao Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Eder Militao Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka (Tiffany Alvares), Nwanna (Militao Junior), Nwanne nwanyị (Maria Júlia), Ndụ, Ndụ Onwe na Networth.
Na nkenke, anyị na-egosipụta Life Life nke nwatakịrị nwoke bụ onye hụrụ n'anya na-efe efe ya kama iri nri ma ọ bụ igwu bọọlụ n'oge ọ bụ nwata.
Bodị Lifebogger nke Akụkọ Akụkọ Brazil malitere site na Oge Mbido ya ruo mgbe ọ ghọrọ Onye ama ama na egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị na-akpali mmasị na ọdịdị nke Eder Militao Biography, anyị na-amalite site n'igosi gị ndụ nwata na ịrị elu gallery.
Ga-ekwenye na m na foto ị hụrụ n'okpuru na-achikọta ya Footballing Life Story and Journey.
Eder Militao Biography. Lelee mbido nwata nke Brazil na Akụkọ Ọma.
Ee, mụ na gị nwere ekele maka ntụgharị uche ya na atụmatụ ndị ahụ yiri ndị dike ọ na-eweta na egwuregwu ahụ. Ka a sịkwa ihe mere, Spanish Media powerhouse (Marca) na-ele ya anya ọdịnihu maka Real Madrid.
N’agbanyeghi nkwenye ndị a, anyị chọpụtara na ọ bụ mmadụ ole na ole maara Eder Militao's Bio. N'ihi nke a, na maka ịhụnanya maka football, Lifebogger agafeela ịmepụta Memoir ya. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Eder Militao Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha zuru oke Éder Gabriel Militão. A mụrụ onye na-agba bọọlụ na ụbọchị 18 nke Jenụwarị 1998 nne ya, Ana Maria Militão na nna, Valdo Militão na Sertãozinho, Brazil.
Onye a na-agbachitere agbachitere Brazil bịara n'ụwa dị ka nwa nwoke nke abụọ n'etiti ụmụ atọ (ya onwe ya, nwanne nwoke na nwanne nwanyị).
Amụrụ ha sitere na njikọ alụmdi na nwunye dị n'etiti nne na nna ya (nke dị n'okpuru) ndị gosipụtara na 50. Kedu onye Eder na-ewere mgbe ọ gbasara ọdịdị ihu?
Zute nne na nna Eder Militao - Ana Maria Militão (mama ya) na Valdo Militão (papa ya).
Onye etiti ahụ nwere ọ joyụ na nwata na Sertãozinho, obodo Brazil dị na steeti São Paulo.
Éder Militão tolitere na nwanne ya nwoke nke okenye nke aha ya bụ Militao Junior. Afọ ole na ole mgbe e mesịrị, nne na nna ya mụrụ nwanne ya nwanyị nke nta, Maria Júlia AKA Maju. Lelee ezinụlọ nke nuklia.
Eder Militao tolitere dị ka nwatakịrị na-eme ihere. Ọ bụ onye na-atụkwasị onwe ya obi, onye na-eche echiche nke ọma, na onye nwere ọmịiko. Naanị Eder na-atọhapụ onwe ya n'ụlọ yana ezinụlọ ya na n'okporo ámá mgbe ya na ndị enyi nọ.
N'adịghị ka nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Militao Junior, ọ bụ ụdị nke na-enweghị mmasị ịnwale ihe ọhụrụ. Ihe niile Eder Militao mere (ehihie na abalị) na-agba ịnyịnya ígwè ya na egbe na-efe efe.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ngwụsị izu, ọ malitere ịmalite ịga n'okporo ámá nke Sertãozinho iji tụba egbe ya na mbara igwe. N'ihi nke a, onye ọ bụla nọ n'ógbè ya nyere ya aha ahụ - Kite Boy.
Kite na-efe efe enyela Éder Militão ncheta nwata kacha mma.
Otu ihe dị ụtọ Eder bụ ịhụ ka egbe ya na-arị elu nke elu igwe na-enweghị amata ihe ntụ ikuku ga-efe.
N'ikwu nke a, ọ maghị ole ntụgharị na ntụgharị ga-abịa tupu ụgbọ elu ahụ agwụ. Mgbe ị na-eme nke ahụ, obere Eder maara na ọ bụ ihe ịrịba ama nke ike football ya na ebube na-abịa.
Eder Militao Ezigbo Ezinụlọ:
Eziokwu ka a ga-ekwu, ihe ịga nke ọma onye Brazil bụ etolite nke usoro agbụrụ ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Eder Militao sitere na ezinụlọ nwere football nke na-agbafe na akwara ha.
You maara?… Tupu nne na nna Eder Militao akpọrọ ya, papa ya (Valdo Militão) kpọọrọ ndị Kọrịnt - ya na ndị Legendary Rivaldo.
Foto dị n'okpuru, ọ nọ n'etiti otu ndị meriri aha abụọ ahụ. Nke mbụ bụ Paulista na nke abụọ bụ Copa do Brasil, ma na 1995.
Nke a bụ papa Eder Militao (Valdo) n'oge ọ na-egwu egwu (n'aka ekpe) na mgbe ezumike nká (n'aka nri).
Igosipụta na elu ụgbọ elu nke Brazil na-egosi eziokwu ahụ na Valdo Militão nwere ike ịbụ na ọ ga-enweta ọtụtụ ego site na ọrụ ya. Nke ahụ gaara elekọta ezinụlọ ya.
Maka nke a, Lifebogger chere na Eder esiteghị na ezinụlọ dara ogbenye. Amuru ya ma zulite ya na ulo di nma - ekele diri papa ya.
Eder Militao Ezinụlọ:
Ihe mbu, onye Brazil nwere mgbọrọgwụ site na Pontal, obodo dị na steeti São Paulo na Brazil.
Obodo nta a (Pontal) bu ebe amuru nna ya. Ọ bụkwa ebe nne na nna ochie Eder Militao si. Ndị ọgba bọọlụ kọwara onwe ya dị ka nwa amaala Sertãozinho makana a mụrụ ya ebe ahụ.
Maapụ a kọwara Eder Militao Family Origin.
Dika edere na eserese ngosi, uzo abuo di na 18.5km ma obu nkeji nkeji 21. Eder bụ onye a ma ama na Sertãozinho, obodo a ma ama maka mmepụta nke ethanol na okpete.
Mmụta Eder Militao:
Havinghapụ ụmụ ha nwoke ịga ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ bụrụ ndị na-agba ụkwụ na ụkwụ ga-eme ka ha guzobe ihe egwu nke ịrụ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ n'otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Sertãozinho.
Nke a abụghị atụmatụ ndị nne na nna Eder Militao chọrọ maka ụmụ ha. Ha chọrọ ka Eder na Junior gafee ụlọ akwụkwọ dị mkpa - nke ha mere.
Eder Militao na nwanne ya nwoke, Edvaldo Jnr sere ihe osise n'uwe nke ụlọ akwụkwọ ha. A eziokwu na ha gụrụ akwụkwọ.
Ana Maria na Valdo Militão - kwanyeere iwu mmụta akwụkwọ mba Brazil nke kwuru na ọ bụ iwu na ụmụaka Brazil ga-aga akwụkwọ site na afọ 6 ruo 14.
Maka nke a yana ịgba bọl, Eder na Junior (nwanne ya nwoke) gafere ọkwa nke isi na nke abụọ nke agụmakwụkwọ ha.
Eder Militao Football Akụkọ:
Nwa nwoke a echekwara, nke sitere na ezinụlọ dara ogbenye, na-etinye aka ma lekwasị anya n'ihe atọ. Nke mbụ bụ ụlọ akwụkwọ ya, nke abụọ na-efe efe na nke atọ na-agba ịnyịnya ígwè ya.
Eziokwu bụ, Eder enweghị mmasị na football. Ọ bụdị onye na-akwado ya ikwu obere okwu banyere ibi ndụ nna ya. Naanị ihe omume atọ ya na agụmakwụkwọ.
N'agbanyeghị na ọ tolitere n'ụlọ ebe a na-eme egwuregwu football, Eder enweghị mmasị n'echiche nke ịgbaso nzọụkwụ papa ya (Valdo Militão).
Dị ka ọtụtụ ndị na-agba bọlbụ (nke nwere nwa na-achọghị), ọ na-esiri Valdo ike obibi ezumike nká - kwuo obere okwu banyere inwe nwatakịrị na-enweghị mmasị na ịga n'ihu na ezinụlọ.
Eziokwu bụ, Eder Militão achọghị ọrụ ịgba bọl. N'ezie, ọ tụkwasịghị obi na ya nwere ike ibi ndụ kwekọrọ n'ihe papa ya mere na egwuregwu ahụ.
Mkpebi Valdo Militão:
Mgbe ọ nọdụrụ ala iji kwusaa ozi ọma banyere mkpa ọ dị ime ka ezinụlọ dịrị ndụ, Eder mechara kweta ịgbalị ịmalite ọrụ ịgba bọl.
Dabere na Maisfutebol (akwụkwọ akụkọ sitere na Porto), Valdo Militão malitere ezigbo atụmatụ. O bu ụzọ guzobe ọzụzụ na otu nwa ya nwoke, onye n'oge a malitere inwe mmetụta nke akara aka ya ịgbaso nzọụkwụ papa.
Ka oge na-aga, ihe malitere ijikọ onwe ha. Eder malitere inwe udo nke uche na nkwenkwe dị n'ime - ihe omume nke mere Valdo (papa ya) bido mkpebi ya ọzọ. N'adịghị ka ederede Wikipedia, ndị ịgba ọsọ bọọlụ amaliteghị ọrụ ntorobịa ya na Sao Paulo agụmakwụkwọ.
Eder mbụ nke bọọlụ agụmakwụkwọ nwere otu n'ime ndị otu egwuregwu Sertãozinho. Papa ya kpebiri ime ka ọ rụọ ọrụ ọzọ mgbe ọ na-eme ememme nwa nwoke nke Golden Shoe na asọmpi mpaghara.
Ọrụ Eder Militao Early. A na-ese onyinyo ya na-eme nsọpụrụ mbụ ya - Akpụkpọ ụkwụ ọla edo.
Ọ bụrụ na ị maghị, Eder malitere dị ka ihe mgbaru ọsọ. Nke a bụ ihe mere o ji nweta nsọpụrụ akpụkpọ ụkwụ ọla edo.
Ọrụ Camisa 10:
Mgbe ọ dị afọ 12, Valdo (mgbe ọ jụsịrị ndụmọdụ na ịnakọta ndụmọdụ site n'aka enyi ya aha ya bụ Agnello Souza) kpọọrọ nwa ya nwoke ka ọ debanye aha na nnukwu ụlọ akwụkwọ football.
Camisa 10 bụ ihe egwuregwu bọọlụ oge niile nke nwere ihe karịrị ụmụaka 300 (ọkachasị ụmụ nwoke n'ụlọ akwụkwọ) na-apụ apụ iji meere onwe ha aha.
Ohere agaraghị enwe ma Agnello Souza, nwoke nyeere Valdo aka n'oge ọ bụ nwata.
Edvaldo, Éder, Agnello na Valdo Militão (site n'aka ekpe gaa n'aka nri)
Agnello Souza, enyi Valdo Militao ghọrọ ezigbo onye nkụzi seriousder. Ọ na-elekọta ya na ọtụtụ ndị otu ya na Camisa 10.
Eder so na Camisa 10 Project mgbe ọ ka na-aga akwụkwọ - dịka nwata akwụkwọ. Agbanyeghị, na bọọlụ, ọ pụtara ngwa ngwa - site na ndị otu ya.
Nwa anyị nwoke, Eder dị mma nke na a gwara ya ka ya na ụmụ nwoke gwuo egwu afọ abụọ ya. Onye Brazil dị afọ 13 mgbe ya na ụmụ nwoke gbara afọ iri na ise na-egwuri egwu.
Ná mmalite, a maara Eder ka ọ na-agbasi ike. Nke ahụ mere ka ọ nwee ọtụtụ goolu. N'ezie, Eder hapụrụ nnukwu ihe mgbaru ọsọ dị n'etiti ya na ndị ọzọ akara.
Àgwà ahụ mere ka ọ pụọ iche n’ebe ndị ọgbọ ya nọ. Ọ bụ ihe ịrịba ama na onye Brazil abanyelarịrị karịa otu ahụ wee chọọ ịrị elu n'ọkwá ahụ (gaa nnukwu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ).
Ọnwụnwa Sao Paulo na Nkwenye:
Mgbe ọ dị afọ 14, Eder na papa ya kwadebere maka njem kachasị ogologo nke ndụ ya. Ọ bụ onye na-agba ọsọ na 338km (4 awa 5 nkeji ụgbọ ala) site n'ụlọ ezinụlọ Militao na Sertaozinho ruo mpaghara Morumbi - ebe Sao Paulo FC dị.
Isi ihe dị na njem ahụ bụ ime ka nwa ya nwee ule na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Sao Paulo. Eder nwetara ule na-aga nke ọma atọ - nke ọ gafere na agba na-efe efe.
N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ọ dị afọ 14, nwata ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta ntorobịa mbụ ya na onye isi bọọlụ Brazil - Sao Paulo FC.
Eder Militao Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọdịdị nke nwa amaala Sertaozinho anaghị ewe ogologo oge ka a mata ya na klọb ọhụụ ya. Onye nkuzi Eder chọpụtara na ọ nwere ike igwu egwu n'ọchịchị bọọlụ ọ bụla - midfield, ọgụ na nchekwa.
Ka oge na-aga, ndị na-azụ ndị ntorobịa nọgidere na-agbanwe ya site n'ọnọdụ ndị a. Na mmalite nke ahụ adabaghị nke ọma na nwata ahụ.
Eder gbagwojuru anya banyere mkpebi ndị nkụzi ya na-eme ka ọ gbaa gburugburu. N'ezie, ọ chọrọ mgbalị nna ya iji mee ka obi jụrụ ya. Dị ka Valdo si kwuo;
Eder gbagwojuru m anya, mana m mesighachiri ya obi ike Calm down na nọrọ na-ege ntị. Na ndị nkụzi ya anaghị ata ya ahụhụ.
The Junior National Team Kpọọ:
Afọ 2015 ghọrọ ngọzi nye ezi-na-ụlọ Eder Militao. Nwa ha nwoke hụrụ ọkwa otu mba. N'ịghọta mgbalị ndị ọ na-eme, Eder nwetara oku ka ọ sonyere ndị otu Brazil n'okpuru-17.
Oge a dị ka onye na-agbachitere nchebe, ọ nọchitere mba ahụ na 2015 World Cup World na Chile. Ederi Brazil wepụrụ Eder na Brazil na nkeji iri na ise site n'aka ndị otu Kelechi Nwakali nke Nigeria bụ ndị mechara bụrụ ndị mmeri.
Ọganihu Sao Paulo Na-aga n'ihu - Imitomi Ọrụ Nna Ya:
N'ikpeazụ, a kwadoro ọnọdụ football maka Eder. Onye nchịkwa ya na Sao Paulo (Dorival Júnior) hụrụ ya ka ọ bụrụ onye ruru eru dịka onye na - agbachitere - dị ka papa ya.
Na nke ahụ, Eder Militao nọgidere na-agbachitere ọnọdụ ya - nke ọ debere ruo ụbọchị. Ọ gara n'ihu na-agbanwe na klọb - na-enyere ndị otu agụmakwụkwọ ya aka ka ha merie nnukwu trophi - otu n'ime ha ka a hụrụ n'okpuru.
Eder Militao meriri ijide otu iko o meriri na agụmakwụkwọ Sao Paulo.
Egwuregwu ndị okenye na ọbụbụenyi kacha mma:
Éder Militão nọchitere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ São Paulo ruo mgbe ọ dị afọ 18 - oge ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara ya. Tupu ya agụchaa akwụkwọ, ọ hụrụ onye anya dị ka Luizão - onye ghọrọ ezigbo enyi ya.
O siri ike ịkọwa ihe dị n'etiti ụmụ nwoke abụọ ahụ. N'ezie, Eder na Luizao yiri nnọọ nke na ndị mmadụ na-agbaghakarị ha dị ka ụmụnne ọbara. Lelee maka onwe gị.
Eder na Luizão dị ka ụmụ ejima. Ha na-egwuri egwu dị ka ndị na-agbachitere na ndị etiti maka Sao Paulo agụmakwụkwọ.
N'etiti onye ọ bụla n'ime ndị otu ya, Luizão bụ otu n'ime kpakpando agụmakwụkwọ nwere obi ụtọ bụ onye natara oku mbụ na Europe na FC Porto.
Mgbe ha bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta na Sao Paulo, ụlọ ọrụ Portuguese were ngwa ngwa nwanne ejima Eder Militao ka ọ kpọọ maka ndị otu ha - ọ bụghị ndị isi FC Porto.
Eder Militao chọsiri ike iso Luizão kwaga - dịka FC Porto nwekwara mmasị ịkpọrọ ya. Nke ahụ agafeghị n'ihi ihe ezinụlọ.
Papa ya Valdo mere ka nwa ya nwoke nwee ndidi ka ya na Sao Paulo dị elu. Karịsịa, chịkọta ahụmịhe mpaghara wee gaa mba ọzọ maka otu ndị okenye na ọ bụghị dị ka ihe egwuregwu.
Eder Militao Bio - Ebili Na-ewu ewu Akụkọ nke Ọma:
Luizão mere ihe ka ukwuu iji mee ka ezigbo enyi ya kwenye na FC Porto. Mgbe ngwụsị nke oge ahụ gasịrị, ọ ga-aga Brazil ka ya na ezinụlọ ya nọrọ ezumike ya gụnyere Eder. Ka ha na-ezukọ, ha abụọ ga-akparịta ụka banyere ndụ Europe.
Eder Militao mechara kpebie ịnakwere FC Porto mgbe ọ gwusịrị egwuregwu iri anọ na itoolu wee merie ihe mgbaru ọsọ ise na Sao Paulo. Banyere ahụmahụ nyefe, papa ya kwuru na nyochaa;
Ọ gara na nke aka ya. Mgbe FC Porto nwere mmasị, agwara m klọb okwu ọtụtụ oge.
M na-ekwukarị otu ihe ahụ Eder… Ngwanụ, a ga m ekwe gị naanị ma ịchọrọ ịga. Ma ọ zara; Achọrọ m ịga, nna. Achọrọ m portugal.
You FC Porto chọsiri ike na enweghị ike ịchọrọ ruo Jenụwarị 2019 mgbe nkwekọrịta Eder na São Paulo kwụsịrị. Onye nnukwu Portuguese ahụ bịanyere aka na ya ngwa ngwa mgbe ọ kwụrụ São Paulo nde euro anọ.
Iji nyere 20 afọ aka ime mgbanwe na Europe, nne Éder Militao, nna na nwanne nwanyị nwanyị dị afọ asaa niile chịkọtara akpa ha Portugal iji soro ya biri.
Mgbe ọ nọ na FC Porto, Militão ngwa ngwa kwadoro onwe ya na otu iri na otu na-amalite dị ka etiti-azụ. Mepụta mmekọrịta na-agbachitere ya na onye otu ibe Felipe, onye na-agbachitere ya bilitere n'oge niile.
N'oge na-adịghị anya, Eder Militao ghọrọ otu n'ime ndị na-agbachitere kachasị mma na Europe dum.
Na Septemba 2018, ihe dị ka ọnwa abụọ ka ọ sonyere FC Porto, Eder Militão (maka ọ theụ nke ezinụlọ ya) kpọrọ oku. Oge a, site n’aka onye nchịkwa Tite, ka ọ bụrụ akụkụ nke ndị otu egwuregwu mba Brazil.
Na Mee 2019, Eder Militão tinyere na ndị otu 23 maka ndị asọmpi 2019 Copa América. Ọrụ ya pụrụ iche na egwuregwu ikpeazụ (mgbe ọ gachara Philippe Coutinho) nyeere obodo ya aka ịnwụchi iko nke Copa America.
N'ezie, ọ bụ nnukwu mmetụta na nganga ka ndị òtù ezinụlọ ya nwee mmetụta nke ebube CONMEBOL America Cup (aha Copa America).
Maka Eder n'onwe ya, nke a bụ nnukwu nkwado na ya CV footballing. Ọchị nke onye ikpeazụ a mụrụ n'ezinụlọ (Maria Júlia AKA Maju) dị oke ọnụ.
The Real Madrid Kpọọ:
Na-agba aka nká nke ndị na-agbachitere ndị agha ha - ihe dị ka Sergio Ramos, Marcelo, Nacho Fernandez ghọrọ isi iyi nke nsogbu nye Los Blancos.
Na nzaghachi, nnukwu ndị Spain kpebiri itinye olileanya ha na Éder Militão. Vidio dị n'okpuru ebe a na-egosi ihe mere Real Madrid ji banye na onye agha Brazil. O gosipụtara ụbọchị ebube Militao na Dragons.
14bọchị 2019th nke March 50 mechara bịa. Real Madrid kwupụtara na ha abanyela na Militão. Ọ bụ nkwekọrịta dị nde € XNUMX nde afọ isii. Nfefe a bịara mgbe Real Madrid busịrị nnukwu aha - ndị dịka PSG na Bayern Munich.
Onye isi ala Los Blancos, Florentino Pérez, ji ezigbo ịhụnanya na nkwanye ùgwù nabata Ezinaụlọ Eder Militao. Ọzọkwa, Maria Júlia (nwanne ya nwanyị) zuru izu. A na-ese ya ebe a na-agbachi onwe ya gburugburu ogwe aka ịhụnanya nke onye ọchụnta ego Spanish.
Eder Militao onye bịarutere n'otu oge ahụ Eden Hazard emechu ihu Real Madrid. Ọ dị ngwa iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ nwee mmetụta.
N'oge a na-ede Warrior's Bio, o nyeere nnukwu ndị Spen aka inweta La Liga na Supercopa de Espana - niile n'oge mbụ ya. Ọtụtụ trophies maka Militão na-abịa.
Eder Militao Bilie na Real Madrid.
Obi dị m ụtọ, nwata nwoke maara naanị etu esi efe efe, na-enweghị echiche nke ibi nrọ ezinụlọ ya (ịgbaso nzọụkwụ Nna ya) bụzi onye a ma ama na Sertãozinho.
Obi abụọ adịghị ya, Eder Militao bụ otu n'ime ndị na-agbachitere ole na ole (dị ka; Gabriel Magalhães) onye edoziri ka o weghara Thiago Silva na David Luiz - rue nchekwa etiti Brazil. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Warrior's Biography, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Tiffany Alvares? Eder Militao Nwanyị na Nwunye ka ha bụrụ:
Kemgbe ha nwetara otuto zuru ụwa ọnụ, ọtụtụ ndị fans tụgharịrị uche na ajụjụ banyere onye onye Brazil na-eme mkpapụ? Na nyocha anyị, anyị chọtara azịza - gbasara otu nwanyị zuru obi ya.
N'azụ onye egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere otu nwanyị mara mma mara mma. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Tiffany Alvares.
Zute Tiffany Alvares. Nwunye Eder Militao ịbụ.
Tiffany Alvares na-anya isi dị ka nwanyị nke na-elekọta obi Eder Militao. Mmekọrịta ha mere ka ọha na eze mara na July 2019 - n'oge asọmpi Copa America.
Nwanyị nwanyị Eder Militao (Tiffany Alvares) bụ eze nwanyị mara mma nke na-enweghị ọdịmma onwe ya nke na-anaghị eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado nwoke maka nkwado mmụọ n'agbanyeghị na ọ pụtara itinye ndụ ya na njide. Dị ka a hụrụ n'okpuru, ịhụnanya ịhụnanya maka nnụnụ ịhụnanya abụọ ahụ enweghị ọnụ.
Tiffany Alvares na Eder Militao nwere mmasị ịkọrọ ha ọnụ miri emi mgbe ha gachara egwuregwu. Ha abụọ kwekọrọ na ibe ha.
Na ikpe site na foto dị n'elu, anyị emeela atụmatụ Tiffany Alvares dị elu karịa 4 ụkwụ na 9 sentimita asatọ. Maka Eder Militao, ọ bụ naanị nwunye zuru oke.
Enwere okwu a ma ama na - “Mgbe ị lụrụ onye ị na-alụkwa ndị ezinụlọ ha.”Site na ihe osise dị n’okpuru, o doro anya na Tiffany Alvares abụrụla akụkụ na ezinụlọ Militao.
O doro anya na ezinụlọ Eder Militao anabatala Tiffany Alvares n'ime ndụ ha.
N'aka ekpe, ọ na - ese onyinyo nwanne Eder Militao - Maria Júlia, ka ọ na-ehi ụra n'oge egwuregwu nwanne ya nwoke. Ọzọkwa, achọtara Tiffany Alvares na ezinụlọ ya dum.
Eder Militao Ndụ Nke Onwe:
Ewezuga ihe niile football, ịmara onye na-agbachitere gị ga-enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Ugbu a ajuju; Kedu ihe Eder Militao na-eme n'èzí football?
Ihe mbụ na mbụ, ikekwe ị maghị na ọ bụ onye gamer hụrụ n'anya ime ya PC. Site na ihe ọ dị ka ọ, ọ na-egosi na ọ hụrụ egwuregwu egwuregwu - Oku ọrụ.
N'ihe banyere ndụ onwe ya, Eder bụ onye na-enweghị arụsị na football, na-ekwu obere okwu ma na-akpọ asị okwu ihu ọha ma ọ bụ ajụjụ ọnụ Erling Haaland. N'okpuru ebe a bụ otu ihe ngosi vidiyo.
Dị ka onye nkụzi ntorobịa ya bụ Agnello si kwuo, ọ bụ nwata nwoke echebere site na onye dị umeala n'obi, na-agbasi mbọ ike ime nke ọma ma ka mara ọnọdụ zuru oke iji bido egbe. Dị ka onye nchịkwa nwata ya si kwuo;
Eder enweghị ihe efu. Mgbe ọ bịarutere ebe a na Sertãozinho ileta ndị ikwu na ndị ikwu, ọ na-aga n'okporo ámá n'enweghị nsogbu ịgwa mmadụ niile okwu.
Ọ na-aga n'ihu ịmalite egbe ahụ, n'agbanyeghị afọ ndụ ya… Nke a bụ ihe omume ntụrụndụ ya kasịnụ!
Eder Militao Web Ndụ:
Kemgbe ọ bụ nwata, onye Brazil gosipụtara omume nke onye dị umeala n'obi mgbe niile. Foto a na-arụtụ aka na akaebe nke ndụ Eder Militao. N'ime ụlọ ya, ị nwere ike ịhụ ihe niile metụtara ebumnuche ndụ ya.
N'oge edere Biography ya, Eder Militao ka ga-ebugo ya na Instagram, foto ezumike ya na enyi nwanyị ya na nwunye ya, Tiffany Alvares. Site na ihe o yiri ka, onye na-agbachitere Real Madrid bụ nnukwu onye na-ahụkarị ihe ndị dị n'oké osimiri.
Achikota ndụ Eder Militao dị ka ndị a. Ọ bụ nde mmadụ nke ụgwọ ọrụ Real Madrid nwere ike inye ya ọtụtụ ụgbọ ala, ụlọ obibi, wdg.
Ndụ Eder Militao Ezinụlọ:
Onweghi ihe puru iche dika ulo n’egwuregwu football ebe o pekata mpe, otu nwatakiri na enweta ihe oma n’ilebe anya nrọ papa. Nke a bụ ihe gbasara Brazil. N'akụkụ a, anyị ga-ekpughere ndị ọzọ gbasara ndị ezinụlọ Eder Militao. Anyị na-amalite site na Valdo.
Banyere Nna Eder Militao:
Edvaldo mụrụ na ụbọchị 10 nke Ọktoba 1971 - nke pụtara na ọ bụ afọ 49 na ọnwa asaa. Ọ malitere ọrụ ya dị ka onye na-agbachitere (Aka nri) na Comercial Futebol Clube nke dị na São Paulo, Brazil.
Valdo rutere Parque São Jorge na 1994 wee kpọọ ndị Kọrint n'afọ na-eso ya, ebe ya na Rivaldo meriri 1995 Paulista trophy na njedebe ikpeazụ na-akpali akpali megide Palmeiras. Nke a bụ isi ihe dị na egwuregwu ahụ echefu echefu.
Edvaldo Militao nyekwaara ndị Kọrịnt aka inweta 1995 Copa do Brasil. Anyi nwekwara ihe puru iche nke uzo ikpe azu a.
Mgbe ọ gwachara ndị Kọrịnt, Edvaldo Miltao gafere Atlético Paranaense site na 1995 - 1996. O mechara laa ezumike nká na Comercial de Ribeirão Preto.
Papa Eder Militao bi na Sertãozinho ugbu a. Site na ebe a, ọ na-enyocha ọganihu ọrụ ya. Nnukwu nna bụ isi okwu mbụ mgbe ọ bụla ihe mejọrọ maka nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya.
Banyere nne Eder Militao:
Maka kpakpando Real Madrid, ọ dịghị ihe dịgidere dị ka ịhụnanya dị n'etiti ya na Ana Maria (mama ya). N'ezie, ndị maara Eder Militao nke dị anya na Sertãozinho ga-agwa gị na ọ bụ nwata nwa.
Hụ onye ndị mmadụ na-akpọ Nwa mama.
Ọ bụghị naanị nwa ya nke abụọ - Eder, Ana Maria bụ ụdị nne nke onye ọ bụla na-enweghị ike iguzogide. Anyị nọ ebe a, ụmụ nke ezinụlọ Militao gbara ya gburugburu.
Mmasị nke nne Eder Militao na-adọta mmadụ niile.
Banyere ụmụnne Eder Militao:
Nwanne nwoke na nwanne nwanyị Brazil bụ ndị setịpụrụ mmadụ gụnyere ịhụnanya, esemokwu, asọmpi na ndị enyi ebighebi.
Maria Júlia bụ onye ikpeazụ nke ezinụlọ nke Junior bụ nwa mbụ na nwa nwoke. Ugbu a, ga-ahapụ gị karịa gbasara ụmụnne ndị a.
Banyere Nwanna Eder Militao:
Junior na-etu onwe ya dị ka ọkachamara n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. N'adịghị ka Eder, ọ dịtụghị mgbe ọ nwere agụụ inwe ọganihu dị ka ndị ịgba egwu ọkachamara. Militao Jr nwere ihu mara mma karịa nwanne ya nwoke.
Nke a bụ Junior Militao - dermụnna Eder Militao.
Omume nke ịdị ọhụrụ abụghị naanị mantra nke Junior. Dị ka Ọzụzụ Nkụzi Ahụ, ọrụ ya bụ isi bụ ịhapụ nwanne ya nwoke ka ọ dabara. Chọpụta ihe ga-eme ka ụmụnne gị abụọ na-enwu mara mma.
Banyere Nwanne nwanyị nke Eder Militao:
Maria Júlia AKA Maju bụ nwanne ya nwanyị, karia, onye ikpeazụ amụrụ (akpa aka mummy) nke ezinụlọ. Onye ọ bụla na-amakarị ya (ọkachasị ụmụnne ya) n'ezinụlọ - mana ọ dịghị ebibi ebibi. Mụ na Eder na Junior nọ ya n'akụkụ, Maria Júlia enweghị nchegbu ọ bụla na ndụ.
Nwanne nwanyị nke Eder Militao (Maria Júlia) enweghị nchegbu ọ bụla na ndụ mgbe ọ nwere ụmụnne abụọ buru ibu.
Nna ochie nke Eder Militao:
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ịnwe Nana na Papa gburugburu dị mma maka mmadụ nile. Ezigbo njikọ dị n'etiti Eder na nne nne ya na nne na nna ya. N'okpuru ebe a, ma Grannies abụọ bụ ngwakọta zuru oke nke ịhụnanya, ọchị, na ncheta obi ụtọ.
Zute nne na nna ochie Eder Militao.
Eziokwu Eder Militao:
N'ịchịkọta Biography nke Football Combatant, anyị ga-eji ngalaba mmechi nke Memoir anyị kpughee eziokwu ndị ọzọ banyere ya. N’atufughi oge, ka anyị gaa n’ihu.
Eziokwu # 1 - O mere otu ihe ọchị na Diego Simeone's touchline antics:
Maka Eder, ịnọdụ ala na bench megide Atletico Madrid bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi omume El Cholo na ntanetị. Lee vidio nke jidere onye Brazil ahụ ọchị Diego Simeone.
Eziokwu # 2 - atinggba Gareth Bale Nsogbu:
Ọ bụrụ na ị maghị, ịtụgharị karama na-agụnye ịtụba karama rọba, nke jupụtara na mmiri mmiri, na ikuku, na-eme ka ọ gbanwee ma na-anwa ịtọ ya. Gareth Bale n'ezie eme nzuzu na nke a. Lelee Eder Militao ka ọ na-agụ akwụkwọ Spurs Legend ka esi eme ya.
Eziokwu # 3 - Ichefughi ebe o si bia:
Cheta Camisa 10 Project… ebumnuche ahụ nyere Eder ikpo okwu ka São Paulo mata ya?
N'agbanyeghị na ọ na-arụsi ọrụ ike na oge Los Blancos, onye Brazil ahụ ka na-echeta ileta ma nyekwa ego maka mmepe nke ọrụ ahụ. Nke a bụ Éder Militão na ụmụ Camisa 10 bụ ndị na-achọ ịgbaso nzọụkwụ ya ugbu a.
Eziokwu # 4 - Eder Militao Religion:
Site na ịlele obi ya na aka aka ya nke Jizọs Kraịst na Virgin Mary, ị nwere ike ịkọwa eziokwu na ọ bụ onye Katọlik site n'okwukwe. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Eder Militao bụ Onye Kraịst na akara aka ya na-egosi ntinye okpukpe ya.
Nwere ike ịkọwa Eder Militao's Religion site na Tattoos ya.
Eziokwu # 5 - Eder Militao Tattoos (Ihe kachasị ama ama):
N'ebe onye ozo choputara okpukpe ya, o nwere aru ozo. Ndị ezinụlọ Eder Militao na mbido ya doro anya na ahụ ya. Onye kacha ewu ewu n'etiti ha bụ egbugbu nke Maria Júlia AKA Maju (nwanne ya nwanyị obere) na apata ụkwụ aka ekpe ya.
Nwanne nwanyị Eder Militao nọchiri anya ya na egbugbu n'apata ụkwụ ya.
Ọzọkwa, aka nri aka Eder nwere egbugbu nke na-egosi mpaghara nke ọtụtụ ụlọ na ụlọ. Ọnwụ ahụ na-anọchi anya Sertãozinho, obodo ya.
Ọzọkwa, aha nne ya Ana Maria na-ahụ anya n'aka nri ya. Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị nwere ifuru rose nke na-anọchite anya ihe nnọchianya nke ịhụnanya, mmetụta ịhụnanya, na ịhụnanya maka nwunye ya ịbụ - Tiffany Alvares.
Eder Militao Tattoos - Legkwụ na Aka.
Eziokwu # 5 - Eder Militao Real Madrid Salary to Average Person in Spain:
Nke mbu, ka anyi bido site na ntufu nke ihe o na Los Blancos n’eme.
Eder Militao 2021 Real Madrid Salary (Euro €)
Kwa Afọ: € 9,757,135
Ọnwa kwa: € 813,094
Kwa Izu: € 187,349
Kwa :bọchị: € 26,764
Kwa elekere: € 1,115
Kwa Nkeji € 18
Kwa Nke Abụọ: € 0.3
Kemgbe ị malitere ile Eder Militao'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Onye ọ bụla nọ na Spain na-enweta ihe ruru 2,710 EUR kwa ọnwa. Site na ngụkọta anyị, onye Spen a dị mkpa ga-achọ afọ 69 iji nweta ụgwọ Eder Militao kwa izu na Real Madrid. Chaị!
Eziokwu # 6 - Eder Militao Profaịlụ:
Mgbe ọ dị afọ 22, ndị ịgba ọsọ bọọlụ nwere ikikere dị ike. Dabere na ọkwa FIFA, profaịlụ Eder Militao yiri nke ahụ Jules Koundé na Joe Gomez.
Isiokwu Wiki dị n'okpuru ga-enyere gị aka ịnweta nchịkọta ngwa ngwa nke Profaịlụ Eder Militao.
Aha zuru ezu: Der Gabriel Militão
aha otutu: Milili
Ụbọchị ọmụmụ: 18th January 1998
Ebe amụrụ onye: Sertãozinho
Ndị nne na nna: Ana Maria Militão (Mama) na Valdo Militão (Nna)
Ụmụnne: Maria Júlia AKA Maju (Nwanne Nwaanyị) na Junior Militao (Nwanna nwoke)
Enyi nwanyi - Nwunye ka idi: Tiffany Alvares
elu: 1.86 m ma ọ bụ 6 ụkwụ 1 sentimita asatọ
Net Net (2021): Nde Euro 15
Onye nnọchi anya: UJ Football Talent
Site n'oge ọ bụ nwata, Eder Militao enweghị echiche banyere idebe ndụ ezinụlọ ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, football abụghịdị nke abụọ.
Eziokwu bụ na nwata ahụ achọghịdị ịgba bọl. Oge Eder Militao bụ nwata karịa ịmalite egbe, na-agba ịnyịnya ígwè ya na ịbụ nwa akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ. Ọ naghị amasị football.
Obi dị m ụtọ na ndị nne na nna Eder Militao anaghị amanye ya ma ọ bụ gbarụọ ihu nwa ha nwoke site na football. Dị ka o kwere mee, ha (karịsịa papa ya, Edvaldo) nyeere ya aka ịnakwere ibu ọrụ ya.
Site na nlekọta na nduzi zuru ezu, nwa anyị nwoke nwere ọrụ ịgba bọlbụ karịa nke nna ya na ndị ezinụlọ ya. Lifebogger nwere obi ụtọ ịsị na ọ bụ onye egwuregwu na-aga nke ọma na Sertãozinho - ebe amụrụ na mmalite ya.
Daalụ maka iwepụta oge iji gbadaa ogologo oge a na-atọ ụtọ banyere Onye Agha Brazil. Mgbe anyị na-ede akụkọ ndụ Eder Militao, ndị otu anyị hụrụ na izi ezi na izi ezi.
Jiri amara gwa anyị (site na ịkpọtụrụ) ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na Bio. Lifebogger ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị mee ka anyị mara, site na ngalaba nkọwa, ihe ị chere gbasara Eder Militao.